Tombam-bola mahaliana | FXCC
Home / Trading / Forex Tools / Zanabola
Ny tahan'ny zanabola fototra any amin'ireo banky foibe dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny fampiharana ara-barotra ataontsika. Ao anatin'ity latabatra ity dia nanome lisitra feno amin'ireo tahiry fototra fototra, mifandraika amin'ny banky foibe iraisam-pirenena.
Tokony hisy fiovana mitranga ve, ohatra, ny iray amin'ireo banky efatra lehibe efatra: ny EZB, The Bank Of Japan, The Fed ary ny Bank of England any Angletera, dia mety hisy fiantraikany be eo amin'ny fampisamboram-bola ny paikady.
ohatra: Aleo lazaina fa ny Fed dia manambara ny fiakaran'ny 0.25% amin'ny tahan'ny zanabola Amerikana, avy eo ny teôria dia ny dollar dia hitsangana manohitra azy io ary ny ankamaroan'ny tanora mitovy aminy. Hiverina amin'ny dolara ny mpampiasa vola raha tsaraina amin'ny famoahana tombontsoa amin'ny fampiasam-bola.
Amin'ny teny tsotra, raha mahazo tombony amin'ny 0.5% ianao amin'ny kaonty tahirin-kevitra, avy eo mampiasa vola amin'ny dolara, amin'ny fiara mifangaro dolara Amerikana miaraka amin'ny tahan'ny 0.75%, dia heverina ho sarobidy kokoa ary mety ho fampiasam-bola mavitrika kokoa .
Misy ihany koa ny fiheverana hafa momba ny tahan'ny tahan'ny banky foibe, ohatra, ny fahafahana manararaotra ny antsoina hoe "mitondra fahafahana ara-barotra".
Ny fivarotan-tena dia mitondra varotra dia tetikady izay ahafahan'ny mpampindram-bola mivantambantam-bola iray, miaraka amin'ny taham-pihambahambana somary ambany ary mampiasa ny vola mba hividianana vola hafa, izay manome ny lanjany ambony. Ny mpivarotra iray mampiasa an'io tetikady io dia manandrana manangona ny fahasamihafana misy eo amin'ny tahan'ny. Ity làlam-be ity dia mety ho manan-danja matetika, arakaraka ny habetsaky ny fampiasana ampiasaina. Manatri-maso ireo ohatra tsotra mikasika ny fivarotana varotra eo amin'ny tsena fitadiavam-bola foana isika; raha mihevitra isika fa ny dollar dia hitsangana manohitra ny euro, dia ho fohy EUR / USD.
Raha tsy misy ny tombony amin'ny fotoana fohy, azo raisina ho fanitsiana ny taham-piditry ny banky, ny fampiasam-bola maharitra, ny mpampiasa izay heverina ho "mpivarotra", na "mpivarotra" fanapahan-kevitra avy amin'ireo banky foibe. Ireo karazana mpivarotra manokana ireo dia mety manodina na mihazona ny toerany maharitra eo amin'ny paosim-bola isan-karazany, mifandraika amin'ny fanitsiana ny tahan'ny zanabola. Mety handany vola vitsivitsy isan-taona izy ireo, ary ny varotra ihany no hividianana banky afovoan-tanàna.
Mahazo Taratasy Zava-dehibe amin'ny Banky foibe